နှစ်သစ်ကူးအကြို ၂၀၂၀ တွင်ကြည့်ရှုရန်ပြည့်စုံသော Netflix ရုပ်ရှင် ၅ ခု - Netflix ရုပ်ရှင်
အချစ်ဆိုတာအာမခံချက် - Ricardo Hubbs / Netflix ရဲ့ယဉ်ကျေးမှု
Netflix မှထွက်ခွာသွားသည့်ရုံးချိန်ကဘယ်အချိန်လဲ။ 31 ပြန်တမ်း 2021 ခုနှစ်တွင်ဖျက်သိမ်းခံရ၏အန္တရာယ်အတွက်ပြသထားတယ်
အချစ်, အာမခံချက်သည်နှစ်သစ်ကူးအကြို ၂၀၂၀ အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော Netflix ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နှင့်ပတ်သက်သောအခမ်းအနားကျင်းပပွဲများစွာကျင်းပရန်မလိုပါ။ ယနေ့ည Netflix ရုပ်ရှင်များသည်တစ်နှစ်ပတ်လုံးကြည့်ရှုနိုင်ရန်ညှိနှိုင်းလိုသည်။ သငျသညျကိုသိမ်းပိုက်ထားရန်အများကြီးရှိပါတယ်။
Netflix ကကြည့်ရှုသူများအား ၂၀၂၀ ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးမှာလူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုပေးသည်။ သင်ကလေးငယ်များကိုအိပ်ရာဝင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ရုပ်ရှင်ကားတိုလိုချင်သည်လား၊ သို့မဟုတ်ရင်ရင်ခုန်ကြည်ညိုသော rom-com ကိုဤနှစ်အတွင်းမြင်စေလိုသည်ဖြစ်စေသင်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။
တော်တော်လေးနည်းနည်းလိမ်ညာသူရာသီ7netflix ပေါ်လာပါဘူး
ဤတွင်နှစ်သစ်ကူးအကြို ၂၀၂၀ အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော Netflix ရုပ်ရှင်ကား ၅ ကားဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ Rachael Leigh ပရိသတ်တွေအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပေါ့ပေါ့ပါးပါး rom-com နှင့်အတူစတင်ပါလိမ့်မယ်။ အချစ်, အာမခံချက် ဥပဒေကြမ်းများကိုပေးဆပ်ရန်ရုန်းကန်နေရသည့်သဘောကောင်းသည့်ရှေ့နေကိုအာရုံစိုက်သည်။ အကြီးမားဆုံးချိန်းတွေ့ခြင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုမှဖန်တီးသူကိုတရားစွဲရန် client တစ် ဦး ကသူမထံလာသောအခါသူမပြောနိုင်သည်မပြောနိုင်ပါ။
ဟုတ်ပါတယ်, ဒီရှေ့နေသူမ၏ client ကိုချစ်ကြိုက်လာပါတယ်။ ကျင့်ဝတ်ကိုဖျက်ပစ်သလား။ ကောင်းပြီ၊ ဟုတ်ကဲ့၊ သို့သော်ယင်းသည် rom-coms အမျိုးအစားများမဟုတ်ပါလော။ ကျနော်တို့ကချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရှာတွေ့မှဖြစ်နိုင်သောကြောင်းကိုသိချင်တယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ကုန်ဖို့အပြုသဘောဆောင်တဲ့အရာတစ်ခုခုလိုအပ်တယ်၊ ဒါကဒါကိုပေးဖို့ရုပ်ရှင်ပဲ။
အခုတော့မိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်ရုပ်ရှင်အတွက်အချိန်ရောက်ပြီ။ ပတ္တူ ကိုးမိနစ်ပဲကြာမှာပါ။ သို့သော်နှစ်သစ်ကူးအကြိုညတွင်ကလေးများနှင့်သင်အသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးကိုးမိနစ်သည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်သည်သူ၏ဇနီးသေဆုံးပြီးကတည်းကပန်းချီမထားသူတစ် ဦး အဘိုးအကြောင်းပါ။ ပန်းချီကားဤသူသည်အဘို့အစိတ်အားထက်သန်ခဲ့ပေမယ့်သူကသူ့ဝမ်းနည်းခြင်း၌ကမေတ္တာကိုဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။ သူ၏မြေးမလေးကသူ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုပြန်လည်ရရှိစေရန်ကူညီပေးခဲ့ပြီးဘယ်တော့မျှဖယ်ရှား။ မရနိုင်သောနှောင်ကြိုးတစ်ခုဖြစ်လာစေသည်။
ယခုမိသားစုတစ်ခုလုံးအတွက်နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုအတွက်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဒီဟာနည်းနည်းပိုကြာတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကောင်းတယ်။
ET မြေပြင်ပြင်မှာ သင်ထပ်ခါတလဲလဲစောင့်ကြည့်ပါတယ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည်ယခုအခါ Netflix တွင်ပေါ်လာပြီးမနက်ဖြန်တွင် Netflix မှထွက်ခွာသည့် Netflix ရုပ်ရှင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အခုကြည့်ဖို့အချိန်ကောင်းပါတယ်။
joanna garcia swisher ဘယ်လောက်လဲ
၎င်းသည်ခံစားမှုကောင်းသောရုပ်ရှင်နောက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကလေးများသည်၎င်းကိုနှစ်သက်လိမ့်မည်။ အိမ်သို့ ET ပြန်ရောက်ရန်ခရီးတွင် Elliot နှင့်ဆက်သွယ်ပါ။
၂၀၂၀ မှာတစ်ခါမှမဖြစ်ဖူးဘူးလို့ဟန်ဆောင်လိုပါသလား။ အရာရာကိုပြောင်းလဲဖို့အချိန်တန်ရင်ပြန်သွားချင်တယ်လား နောက်ကျောအနာဂတ် မင်းကိုမင်းကိုပြန်ပြီးဟန်ဆောင်နိုင်ခွင့်ပေးတယ်။
Marty McFly ကို ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင် လိုက်၍ မိဘများအတူတကွစုစည်းနိုင်ရန်သေချာစေရန်ခြေလှမ်းများလှမ်းရန်လိုသည်။ သူမပါလျှင်သူနှင့်သူ၏မောင်နှမများမွေးဖွားဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ အခြားရုပ်ရှင်နှစ်ကားကိုလည်းရရှိနိုင်ပါသည်, သူတို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးအဖြစ်နည်းတူကြောက်မက်ဘွယ်ပါပဲ။
အဘယ်အရာကိုမျှသောလမ်းအတွက်အချိန်ခရီးသွားဖမ်းမိခဲ့သည် နောက်ကျောအနာဂတ် ရုပ်ရှင်များတွင်သင်ရှိပြီးနှစ်သစ်ကူးကလေးများနှင့်အတူနှစ်သစ်ကူးကိုတွေ့မြင်ရန်သင်ကြည့်နိုင်သည်။
ယခုနှစ်မကောင်းသောကြောင့်သင်နှစ်သစ်ကူးEveဝတွင် glitz နှင့်တပ်မက်ဘွယ်ကောင်းခြင်းကိုမလိုချင်ပါဘူးဟုမဆိုလိုပါ ဒီတော့အခုထွက်ကြည့်ဖို့ရုပ်ရှင်တစ် ဦး တည်းသာရှိပါတယ်။ အဆိုပါ Prom ကြယ်ပွင့်ထားတဲ့ပရိသတ်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒါပြီးပြည့်စုံလား? အမှတ်ကပျော်စရာလား အေးဟုတ်တယ်!
အမေရိကန်ထိတ်လန့်ပုံပြင်6Netflix
ရုပ်ရှင်သည်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးအားသူမ၏ရည်းစားနှင့်အတူသူမ၏ကျောင်းသို့သွားရန်အခွင့်အရေးပေးရန်အနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းသို့ ဦး တည်နေသောရုန်းကန်နေသောဘရော့ဒ်ဝေးအဆိုတော်များကိုအဓိကအာရုံစိုက်သည်။ ဒါဟာတ ဦး တည်းနှင့်သာရိုင်ယန် Murphy ကနေလည်းပါပဲ။ သငျသညျပဲ့မှာသူနဲ့ဘာမျှော်လင့်ရမလဲသိသင့်ပါတယ်။
သငျသညျရုပ်ရှင်တွေကိုအဘို့အကပ်နေလျှင်, အနေဖြင့်အချို့နေဆဲရှိပါတယ် 2019 Netflix ကအပေါ်ရွေး။
ဘယ် Netflix ရုပ်ရှင် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နှစ်သစ်ကူးညတွင်သင်စောင့်ကြည့်နေပါသလား ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအတွက်သိပါစေ။
နောက်တစ်ခု:အခု Netflix မှာအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀
ပြီးခဲ့သည့်နိုင်ငံတော်သို့ရာသီ2နေ့စွဲ
hulu ကွပ်မျက်ရာသီရာသီ 2
Rick နှင့် Morty ရာသီဇာတျသိမျးကိုကြည့်ပါ